प्रदेश नं. ५ का ६ जिल्लामा हेलिकोप्टर गस्ति हुने
दाङ, असार ७
सरकारले मध्यपश्चिमका ६ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दुई हेलिकोप्टर मार्फत गस्ती गर्ने भएको छ।
प्रदेश न. ५ का ६ जिल्लाको सुरक्षाको लागि हेलिकोप्टर परिचालन गरेर गस्ति गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। भौगोलिक विकट र सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशिल क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट गस्ति गरिने बुधबार दाङ आएका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुरक्षा सम्बेदनशिलतालाई बुझ्न उनी दाङ आएका थिए। निर्वाचन आयुक्त पौडेल र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशाशक महेन्द्र गुरागाँईले प्रदेश न. ५ का ६ जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट गस्ति गर्ने प्रवन्ध मिलाएको बताएका हुन्।
दाङको भालुवाङलमा एउटा र बाँकेको नेपालञ्जमा अर्को हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिने उनले जानकारी दिए। निर्वाचन सुरक्षाका दृष्ट्रिकोणले जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेका प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका रोल्पा, प्युठान र रूकुमलगायतका जिल्लाहरुमा हवाई गस्ती बढी केन्द्रित गरिने क्षेत्रीय प्रशाशक गुरागाँईले जानकारी दिए।
३१ वैशाखमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कालिकोट , काभ्रे र दोलखालगाएतका जिल्लाहरुमा झडप भएको थियो। केहीको ज्यान समेत गएको थियो। त्यस्तै सम्भावित झडप रोक्न हेलिकोप्टरबाट गस्ति गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। उक्त अवसरमा निर्वाचन आयुक्त पौडेलले दाङसहित प्रदेश न. ५ का पहाडी जिल्ला भौगोलिक विकट क्षेत्रका रुपमा रहेकोले त्यहाँ पनि हवाई गस्ति हुने बताए।
तर उनी दाङपछि स्थलगत अनुगमनका लागि प्यूठान, रोल्पा तर्फ जाँदै छन्। अनुगमनमा क्रममा उनले निर्वाचन तयारीको लागि भएका प्रयास, सुरक्षा प्रबन्ध, दलहरुका चुनावी गतिविधि र आचारसंहिता पालना लगायतका बिषयमा जानकारी लिनेछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ७, २०७४ ०९:४९:३४